Waa maxay sababta farxiyaasha?
Kani waa badeecadeena cusub oo leh naqshad nooc cusub ah. Bacda waxay ka samaysan tahay balaastiig badan. Lakabka sare (polyamide + polyetylen) wuxuu ka ilaaliyaa ogsajiinta iyo qoyaanka; cufnaanta iyo halabuurka way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran baahida macmiilka ama badeecada. Lakabka gudaha (polyetylen) waa mid dabacsan ...